AmaTattoos anentsingiselo-i-Tattoos Iingcamango zobuGcisa
Izilwanyana ziyaziwa njengezidalwa ezikhululekileyo ezi sizathu sokuba kutheni abantu abaninzi beyinkinga. Inokudityaniswa nezinto ezininzi ebomini kwaye yingakho unokufumana amadoda nabasetyhini basebenzise. Abanye abantu badibanisa i tattoo yeentaka kunye nobutyebi, inkululeko, uxolo, uthando, ulwazi, ubulumko, ubuchule, ubuhle, intsapho, umama, ukhokelo olungokomoya kunye nezinye izinto ezininzi.
Iimpawu zeenyoni zenzelwe ukubukeka zipholile kwaye zingavamile kwiloyilo kunye nomlo. Esi sizathu sezizathu zokuba abantu bayayikhetha ezinye izinto zokubhala. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeempawu zeentaka ezineentsingiselo ezahlukeneyo. Nguwe oza kuthatha isigqibo sokuba uluhlobo lwendiza omele uyenze ngayo kwi-body yakho. Izinyoni ziza ngobukhulu kunye nemilo kwaye nganye yazo inento ekhethekileyo ngabo. Abantu abanomdla wokuya inkululeko okanye ukuvalelwa ebomini banokwenza lo mfanekiso okhethekileyo we tattoo. I-tattoo yeentaka ingaba yinxalenye kuyo nayiphi na inxalenye yomzimba ngaphandle kokuba ithole intsingiselo elahlekileyo kwaye nayo ingakwazi ukuxelela izinto ezininzi ngomntu.
Cofa apha ukuze ukhangele iimbonakalo zentaka zakutshanje kwimbono yamadoda nabasetyhini.
unkolo yamaHindu - ngokwamaHindu, i-mandala ithetha ukucamngca. Oku kungenxa yokuba isetyenziswe njengesigxininiso kwaye isibe sisixhobo ngokuphathelele kokomoya.
I-tattoo ye-Mandala sele yintoni abantu abaninzi abasebenzisa ukumela izinto ezininzi ebomini, njengezidalwa zasezulwini. I tattoo ingasetyenziswa ekwenzeni ezininzi iingxelo onokuzifumanisa ukuba ungumthandi we-tattoo inking kwaye ufuna i ngcamango.
Cofa apha ukuze ukhangele i-mandala tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Iveve tattoo ithetha
I tatou tattoo ibe ngumqondiso wothando, uxolo nokuhlonela. Isidalwa esingcwele kumKristu kwaye uye waba udumo ngaphezu kweminyaka. I-tattoo ijuba ifikile ukuhlala nathi ngenxa yobubele bayo. Uninzi lwabantu luyamkela ubuhle obuza kule tattoo. Kukho iingqalelo ezininzi ezinxulumene nehobe. Imela ukuzala, ubufazi kunye nobuhle.
AmaYuda akholelwa ukuba umele ukholo kwaye awusebenzisa ekusasazeni iingcamango kunye nenkolelo yabo. Ingqiqo yamaKristu nayo ixhomekeke kakhulu kuyo. Abo bawusebenzisa bayakholelwa ukuba banomdla kwaye bathandeka.
Ihobe lombhobho lombhalo lithetha ngokubaluleka okukhulu kwihlabathi. Isetyenziswe njengombala wokunyamezela. Imela ukuzinza nokuqhubeka. I tattoo yehobe yenzelwe ukuba yinto enhle. Ihobe elimhlophe limelela ubumsulwa kunye nokungabi namacala. Akumangalisi ukuba amantombazana amantombazana ayifake kwiinki zawo zokuqala njengophawu lokuhlanzeka nokunyamekela. Abantu banokongeza ezinye iifayile kunye nehobe kuquka ukusetyenziswa kwemilayezo ukuxelela intsingiselo eyahlukileyo yomboniselo wehobe.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yehobe ye-dove idalwe kwindoda kunye nabasetyhini.
I-tattoo yenyanga iyenye uhlobo oluthandwayo lwe-inking ngenxa yeli limela. Uninzi lwabantu abayinto enokukholelwa ukuba lunempembelelo phezu kwamagunya asezulwini kunye neenkwenkwezi, lithetha imbali kunye nesayensi. Abantu abasebenzisa le tattoo abanakunomdla kwiingcaciso ezingentla apha ngenxa yokuba itekisi yenyanga ineentsingiselo ezininzi. Inani leentsingiselo enyangeni yinto eyenza ibe yinto engavamile. Inokudibaniswa neminye imifanekiso ukunika iingqiqo ezintle. Ezinye zeentsingiselo zenyanga zingenza umlingo. Abo bakholelwa kumatshini bangayinayo tattoo kunoma iyiphi nayiphi na imizimba yabo. Ubume bendoda yenyanga yinto eyenza abantu bawuthe inkqubela emzimbeni wabo ngelixa abo bebalitshilo ukuba limela ukulala nokuhlaselwa.
Inyanga inokuthi ibe nentsingiselo kumfazi wesstique. Inyanga ingayibonisa ubugcisa kunye nabo bafuna ukuzala, kuyisisitye esipheleleyo. Inyanga nayo ibonisa ukukhula, ukungalungi, inkumbulo yalabo abayifumanayo, inkolelo, inkolelo yeWiccan, ukukhululwa kwamandla angenamandla kunye namacala amnyama. I-tattoo yenyanga ingamelwa kunye nezinye izinto ukunika intsingiselo ekhethekileyo.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yenyanga yokwakheka kwimizimba yamadoda nabasetyhini.
I-Octopus Tattoo ithetha
Uyilo lwe tattoo luyimangaliso ngokwaloo nto kutheni abantu banalo kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba wabo. Umnxeba unzima kwaye le yindlela emele ngayo izinto ezahlukeneyo. Ubungqina bomntu siqu okanye obuntsingiselo ye-octopus yinto eyongeza kwiimpawu ze-octopus. Iimfundiso zamandulo zithi i-8 njengenani elibalulekileyo kwiinkalo ezininzi zobomi. Esi sizathu sokuba izidalwa ezineemilenze ezisibhozo zibhekwa njengamandla. I-octopus iwela kuloluhlu lwendalo. I-octopus tattoo intsingiselo ivela kumandla amagatsha okukhula. I tattoo inokuthi ukuhlaziywa nokuvuselelwa.
Uninzi lwabantu basebenzise ukukholelwa ukuba amadlelo abo angasuswa. I-tatto tattoo ithetha ukuba kukho ithemba kwixesha elizayo. Ikhono le-octopus ukwenza izinto ezininzi kunye neenyawo zalo ezininzi ezenza abantu bakholelwe ukuba isidalwa sininzi. Kubonisa ukuba i-octopus tattoo yilabo bafuna ukuzalwa kwakhona. Umnxeba uthetha umlingo, obalaseleyo kunye nobunzima. Ukuyila kwe-octopus yinto eyenza ukuba ivele phakathi kwesihlwele ngenxa yokukwazi ukudala inkxaso.
Cofa apha ukujonga i-octopus tattoos ingcamango yombono wamadoda nabasetyhini.
I-Tattoo tattoo yenye yezona zibethe kakhulu kwiAsia. Intsingiselo yehlosi yinto eyenza ibonakale. Umzobo we-tiger yiloo nto ibonisa indlela umntu ahlala ngayo ngaphandle kwesithintelo. Bamele imvelo, ubunzima, amandla kunye namandla. Zingathiwa zi-totems zelanga ngenxa yokuba zikholelwa ukuba zilawulwa ngamagunya asezulwini.
Abantu abaya kwi tattoo ze-tiger abalawulwa ngumdla ngenxa yokuba bakholelwa kwiimvelo. Abathandi bayayinayo le tattoo ukubonisa indlela abanamandla ngayo. I-tiger ikholelwa ukuba iyabakhusela abo bafe. Esi sizathu sokuba bavame ukubonakala emangcwabeni okanye kumangcwaba.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yamathambo ekwakhiwa kwamadoda kunye nabasetyhini.
I-tatcatcher tattoo ithandwa ngabantu baseMveli eMelika. Umzobo we tattoo ufuzisela ifa lemveli yelifa. I tattoo ye-dreamcatcher inceda ekuthatheni amandla amabi kunye nambi. Abantu abafuna ukuthusa iiphupha elibi okanye iibhulozi basebenzise umbala we tattoo. Abo bangenayo tattoo banako ukulala ngokuthula nangokuvuya. Ukuba uceba ukwenza i-tattoo design ekhethekileyo eya kuxela amabali amaninzi ngokubaluleka kwayo kubomi angasebenzisa it tattoo.
Cofa apha ukuze ukhangele i-dreamcatcher tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Iintsingiselo ze-Aigu Tattoo Designs yinto enokuyithanda ukuyazi. Kukho iziganeko ezininzi eziza kunye ne tattoo. Ukhozi inyosi eye yaqhayisa emhlabeni jikelele kwaye inamandla enamathele kuyo. Kungathetha amandla, ithuba, ubulumko, inkululeko, ubuqili kunye nobuntu, amandla, ukulawula, ithuba, umthunywa onothixo kunye noomoya. Kuthetha izinto ezininzi kumandla amaninzi. Uyilo lwenza luyingqayizivele ngempembelelo yalo yokulawula. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeenkwenkwezi eziza neentsingiselo zazo.
Amaphiko e-ntshona athetha ngentetho kunye nokukhuselwa. Ukuba ukhangele inkululeko, enye yeenking onokuyifumana ngayo ithambo le-ukhozi. Ukhuseleko olunikezelayo kutheni abaninzi abantu basebenzise ukunyamekela ububi. Umzobo we tattoo ukhozi wenziwa ngendlela enokuthi intsingiselo ezayo nayo ichanekileyo ngokupheleleyo. Yingakho iyanqabile kwaye iyanqabile. Ubunzima beentaka yinto exabisekileyo emhlabeni jikelele. Ukuba ufuna ukubonakaliswa ngokuphawulekayo kobukhulu obuqhotyoshelwe emzimbeni wakho, tattoo yokhozi yinto eyakwenza loo mboniso.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yolwaphulo lwangoku kwindoda kunye nabasetyhini.
I tattoo yamehlo ixhaphake kwiinkcubeko ezahlukeneyo kwaye ihluke kumaKristu kwizithethe zaseYiputa. Iliso liyakunceda ekufuzeleni i-omniscience, ukukhuselwa okanye ukucaca. Abanye bangayisebenzisa ukumela imizimba. Kungakhathaliseki ukuba unjani uhlobo lwenjongo onayo, itekisi yamehlo yinto eya kukunceda ekumelwe kwakho. Nangona uvukelayo, iliso uligubungile. Akukho namnye ongaboniswa kwi tattoo kwamehlo kwaye ukuba uyayixabisa indlela yokuphila yabesifazane, awukwazi ukwenza nge tattoo yamehlo.
Iliso lezilwanyana ezahlukeneyo limela izinto ezahlukeneyo. Thatha umzekelo amehlo e-horus kunye nabanye, unobumba obuthethayo obaluleke kakhulu kumntu ombetheyo. I tattoo iliso lihle kakhulu kwaye lichaza ngokuphakamileyo kwekamva lakho. Iliso liye lenza umzobo we tattoo owenza abantu baqonde indlela yabo yokuphila. Ubume bonke obonwayo boothixo banokumelwa ngamehlo.
Isicatshulwa sezandla sinokuqonda xa kulungiswe ezinye izinto okanye imiyalezo oyaziyo ukuba imele ntoni. Uninzi lwabantu abavela kwihlabathi lonke lisebenzisa i tattoo kwamehlo.
Cofa apha ukujonga i-tattoos yangaphambili yamehlo yombono wokuba amadoda namabhinqa.
I tattoo yeentyatyambo iyaqhelekileyo kwaye iyathandwa kwiinkcubeko ezahlukeneyo zehlabathi. Ngokwesiko, i-tattoo yeentyatyambo ibaluleke kakhulu kubafazi. Ubuhle beentyantyambo kubonisa izinto ezininzi ngokuxhomekeka kwientyatyambo ezisetyenziswayo. Ientyantyambo ze-rose zinentsingiselo yayo nje ngezinye iintyatyambo zineentsingiselo nazo. I-tattoo yaseJapan i-tattoo iphakathi kwezona zidume kakhulu kwaye zinentsingiselo ebalulekileyo kuyo. Iintyatyambo zingabonisa uluntu, ukuvelisa, ukuzala, inkxaso, ukuphupha, umlingo, uxabiso, ukunakekelwa nothando. Intsingiselo yeentyatyambo inxulumene nesigijimi sokuba isambatho sifuna ukudlulisela kwabanye.
Intsingiselo ye tattoo ayikwazi ukunyanzelwa ngenxa yeempawu ezikhoyo. Abantu ngoku kwandisa imiphumo yemilingo ngokudweba ezinye izinto okanye izinto kuzo ukuze banikeze uhlobo oluthile lomyalezo onokuthi lusetyenziswe kubo kuphela. Zonke iintyatyambo ezivela kwi-rose ukuya kwientyatyambo ze-lotus zinentsingiselo yazo. Nguwe oya kuthatha isigqibo malunga nohlobo lomyalezo ofuna ukuyidlula. Iimpawu zetattoo zeentyatyambo zenye yezona zinto zilungileyo kakhulu ngenxa yeentsingiselo ezinkulu kunye neempawu abazenzayo emhlabeni jikelele. Xa iintyatyambo zongezelelweyo amagama, imibala kunye nezinto, zibonisa iintsikelelo ezinkulu.
Cofa apha ukuze ukhangele i-tattoos ye-flower tattoos ingcamango yamadoda nabasetyhini.
I tattoo yejometri ithetha okungakumbi kunokuba ungacinga. Unesakhiwo esikhethekileyo esifana nesimo. Oko oku kuthetha oku kuqhubekayo kwaye kuchanekile. Ubume buninzi obwenziwe ngeemathematika kwaye kuye kube yinto ebonisa ukuba abantu abaninzi basebenzise ukumela ukuchaneka, ukulinganisela kunye nokuvumelana. Kwakhona kuthethwa ngokubikezela ngenxa yendlela indlela yokuyila ngayo.
I-tattoo ye-geometric intsingiselo ingathetha ukunethezeka nokuqhelekileyo. Yonke into malunga nejometri ibonisa ukwaneliseka kunye nolonwabo, kunye nendlela eyiyoyiyenzela ngayo yenza uhlobo olulodwa oluqhelekileyo lwe tattoo. Inqununu yolonwabo lwabantu abaninzi inokutsalwa kwi tattoo. I-tattoo ye-geometric ibe yile bhuloho enokusetyenziswa kakhulu ekuxabeni oko bakuphumelele ebomini.
Cofa apha ukuze ukhangele ijeytoji zeejimethri ngcamango yombono wamadoda nabasetyhini.
I-Hamsa tattoo intsingiselo enkulu kwaye ineentsingiselo ezahlukeneyo kwihlabathi. I tattoo iqulethe iipateni kunye neempawu ezinikezela ngayo lo mqondo wezobuchule. Ezi zintlanu kwi tattoo zimela iingqondo zabantu. Kukholelwa ukuba tatto tattoo ibonisa ukuzithemba, ukukhuselwa, ukuzola kunye nobungqina. Kukho iindlela ezimbini ezinokumelwa ngayo tatto tatsa. Okokuqala, ingasetyenziswa ekugcineni izinto ezimbi okanye izinto ezimbi. Into elandelayo yile nto isetyenziselwa ukuzisa inhlanhla.
I-tatsa tattoo ingahle ibekwe ngeendlela ezininzi ezifana nokusetyenziswa kweso iso, ingasetyenziselwa ukumela ukukhuselwa; iliso likaHorus. Kukholelwa ukuba leli lihlo liyakwazi ukuhlala libukele abantu kwaye lide lisuse ububi. KwiSilamsi, i-Tatsa tattoo ingasetyenziselwa ukuthetha ngeempawu ezinhlanu zamaSulumane. Yingakho kuthiwa isandla sikaFatima. Isandla sikaFatima simele uFatima Zahra. UFatima, intombi kaMuhammad.
KubuYuda, ibonisa intsingiselo emihlanu emthandazweni wabo kunye neencwadi ze-5 iTorah. I-Hamsa tattoo intsingiselo yinto into ephakamileyo yamasiko asetyenziswa ngayo ukuxabisa ezinye iinkolelo zabo kunye neengcamango zabo. Kuthetha okungaphezulu koko.
Cofa apha ukuze ukhangele i-hamsa tattoos design idea kubafazi.
I-scorpion tattoo ithetha kakhulu kubantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. I tattoo ifanekisela kwaye isekelwe ngokubanzi ekuphatheni kwesi sidalwa. Ingabonisa ukuvusa kunye nobulili kwindoda ngenxa yohlobo lomdaniso owenza ngexesha lokubambana. Isetyenziselwa ukumela ukutyunjwa ngabaMeya kunye ne-scorpion isetyenziswe ngeenkolo ezahlukeneyo ukuthetha izinto ezahlukeneyo, ngokubanzi zihambelana nobubi. Ingasetyenziselwa ukuthetha ukukhuselwa kwaye ibonisa umqhubi.
Uninzi lwabasindileyo bomdlavuza basebenzise itekisi ukuxelela ibali lohambo lwabo lomhlaza. Abaqhubi okanye iibhokisi zebhokisi bavame ukubonwa ukusebenzisa itekisi ukubonisa ukuba bangobani. I-scorpion tattoo ithetha ukuxhathisa kunye nokuzabalazela xa abanye bethatha ukuba bathetha ukuva, ukuhlonipha nokuzinikela. I tattoo nayo ingasetyenziselwa ukuthetha ngokuthanda, ukunyamezela, ukulwa, ukunyamezela, ukukhusela, ukunyamezela, ukukhusela, ukufa, ukunyaniseka nokubi.
Unqume ukuba ufuna ntoni ukuba u-tattoo yakho ithetha kuwe. Kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo zoqulunqo lwe tattoo ongakhetha kuzo kwaye nganye yazo inentsingiselo yazo. Nangona kunjalo, unokwenza umtsalane wakho kumnxeba uthetha into eyahlukileyo.
Cofa apha ukuze ukhangele i-scorpion tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
I tattoo ithetha
I-Tattoos ye-Skull Imilinganiselo ihluka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeengxabano kwaye zineentsingiselo zazo. Ingcamango yokuba i-gawula ithetha ukufa ngabantu abaninzi abanokuthi banyanisekile ngakumbi xa bethatyathwa ngesikhala esikhulu. Ikhanga linokutsalwa ngeendlela ezininzi kwaye ziphelela ngeentsingiselo ezinkulu ozithandayo. I-tattoo yekrele ingaba isikhumbuzo somntu ofa kwaye nokuba sonke sifanele siphile kulobu bubomi.
Ukuyila kwee-skulls zineentsingiselo ezinjenge-tattoo ethandwayo e-skull tattoo edla ngokuba ngum tattoo we-skull waseMexico okanye i-tattoo skull tattoo. Thatha umzekelo abantu baseMexico bawuthanda umhla weT tattoo ngenxa yendima ebeka kuyo.
Abasetyhini abasebenzisa la mathambo asemagqabeni kaninzi benza njalo ngeembala ezibalaseleyo ukuze banike intsingiselo engakumbi. Kukho abantu abadibanisa i-gawuni kunye nama-crossbones ngokukodwa ama-pirates, i-tattoo ineentsingiselo ezininzi ngokubhekiselele kumntu onomdwebo.
Abafazi basoloko basebenzisa imibala ekutshintsheni indlela abantu abayibona ngayo tattoo kunye neentsingiselo nazo zihamba kakhulu.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango ye-skull tattoos ngcamango yamadoda nabasetyhini.
Iintsingiselo zeLanga kunye neNyanga iTattoos yinto ofuna ukuyiqonda xa uya ku-Inking. Umbono we tattoo welanga nenyanga unemilo emininzi kunye nezinto eziyiyo naziphi na i-savvy umntu onokuyisebenzisa. Ukuma kwenyanga kunye nokuma kwelanga kuthethwa ngesangqa sobomi esingapheliyo. Xa ilanga nelanga lifakwe ngaphakathi kwendulungu, intsingiselo ingahluka.
Ukuthetha ngethambo lelanga, limela amandla, amandla kunye nokuzalwa kwakhona xa i-tattoo yenyanga ingayibonakalisa inkalo yabesifazane yobomi kwezinye iindawo xa kuvela kumthikazikazi. Xa ilanga nenyanga zinemibala, iintsingiselo ziyahlukahluka kuxhomekeke kwimibandela oyikhethile. Ilanga elidla ngokubhekisela kwindoda yobomi inokudibaniswa nenyanga ukubonisa ukunconywa kweYin Yang. Ulwalamano olusifazana nolwesilisa lufanekisela ngokupheleleyo ilanga nenyanga.
I tattoo nelanga neenyanga zithetha ngomnqweno onobukrakra phakathi kwabathandi. Yingakho ukuhlanganiswa kwezidumbu ezimbini zasezulwini kuye kwaba yinto emangalisayo yokwenza umdwebo we tattoo onokusetyenziswa ngumntu. Umzobo ngamnye we tattoo unokwenziwa ngokwezifiso.
Cofa apha ukuze ukhangele ingqwalasela yelanga kunye neyangenyanga zembonakaliso yembono yamadoda nabasetyhini.
I tattoo intsingiselo
I-Tattoos ye-Sun ibilokhu idume kakhulu nakwiintsuku zasendulo. Ubunjani bobugcisa belanga bubangele ukuba bobabini nabasetyhini. Ukubaluleka kwelanga kunokuba kungabonakali okanye kulungile kwaye oku kuxhomekeke kwinkcubeko esuka apho umntu evela khona. Akukho mfihlo yokuba ubomi abukwazi ukugcinwa ngaphandle kwelanga. Ilanga linokuthi ubomi, amandla, amandla, uthando kunye nenkxaso yobomi. Oku kungaphinda kuthi ukuzalwa kwakhona kwaye ezinye iinkolo zineenjongo ezikhethekileyo malunga nelanga. Kukho iindlela ezahlukahlukeneyo zokutsalwa kwetattoo yelanga kunye neentsingiselo zazo. Ukuphuma kwelanga kunokuthetha amandla kaThixo kunye nobukho obukhulu. Abantu abaninzi basebenzisa ilanga ukuba baphumelele njengothambo lwelanga elithatyathwa ngumdlali omkhulu wezemidlalo.
Iimpawu zetattoo zelanga zizathu zokuba abantu abafuna ukubonisa amandla abo engqondo kunye nengqondo bahlala behamba kuyo. Ilanga liza ngemibala eyahlukileyo njengombala we-orange onentsingiselo ezikhethekileyo. Ukuma kwelanga kunentsingiselo eninzi ngokwendlela enokwakheka ngayo itekisi. Iimpawu zelanga zibalaseleyo kwaye zinkulu ukubona.
Cofa apha ukuze ukhangele i-tattoos ye-tattoos yombono wendlela yokulungiselela amadoda namabhinqa.
Umthi we tattoo uye waba ngumqondiso wesimo esiluqilima kunye nexesha elide. Imithi ihlale ihlala ixesha elide kwaye ichitha iminyaka engama-500 emhlabeni, isizukulwana esipheleleyo somntu. Yingakho imithi ingenwa ukubonisa ubomi obude kunye nokuqina. Amandla omthi kunye nokulungelelaniswa kwayo nayiphi na imeko yinto enqwenela abantu abaninzi. Nabani na ongayinayo itekiti emzimbeni wabo. Umthi unako ukubonelela amakhaya kunye nokukhusela kwizilwanyana ezininzi. Ukhuseleko oluzisa kwabanye luyinto ephawulekayo. Abo bafuna ukhuseleko kwimpilo yabo bayakwazi ukuyisebenzisa kwiinki zabo. Zininzi iintlobo zemithi eneentsingiselo ezahlukeneyo kunye nokubaluleka.
Umthi uphinde usetyenziswe ezinye iinkonzo zonqulo ngenxa yokubaluleka kwalo. Ngombolo yemithi ekhoyo kunye nesenzo esingokomqondiso esimele, nabani na ongayisebenzisa. Unokusebenzisa umthi osondelene nenkcubeko yakho ekwenzeni ezinye iingxelo ezinesibindi emzimbeni wakho. Isimo somfuziselo somthi singenza intsingiselo engakumbi ngokwezifiso zomthi wakho we tattoo emzimbeni wakho kuxhomekeke kwisiphi isigidimi ofuna ukuyidlula.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yemifanekiso yodolo lwamadoda kunye nabasetyhini.
I tattoo yesithsaba yinto ekhethekileyo kuba ithetha igunya kunye negunya lobukhosi. Isithsaba sisetyenzisiwe njengomnini wezinto ezininzi. Abo bavela kumakhaya asebukhosini baqaphela kalula nge tattoo yesithsaba kuba sisondele ezintliziyweni zabo. Akukho ziindawo kwihlabathi ukuba isithsaba asinabaluleka. Ukubonakaliswa kwe tattoo yesithsaba yinto apho nabasetyhini abanako ukufikelela nabo.
Cofa apha ukuze ukhangele i-tattoos yesithsaba yangoku kwintlawulelo yamadoda nabasetyhini.
Iidayimani zeDayim ziyaziwa kakuhle iimpawu ezinxulumene nobuhle nobutyebi. Ezi tatto zibonakala kwiindawo ezininzi zomzimba kwaye zisetyenzisiwe njengezambatho. I-tattoo yedayimane ingasetyenziselwa ukuthetha ngokungabikho. Le nto ibonisa ukuba tattoo inikela ngenxa yokuba ayikwazi ukutshatyalaliswa.
Cofa apha ukuze ukhangela i-diamond tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Umnxeba unokwenziwa ngokweenkcukacha ukuba ube nezinto ezininzi ebomini njengobomi, ubuhlobo okanye uthando. I tattoo ifanekisela iintliziyo okanye iinkwenkwezi. I tattoo engapheliyo yinto enokufuna ukuyisebenzisa ekuqhubeni loo myalezo onamandla obhenela uluntu.
Akukho mntu wenza ngcono xa kuza kumathambo angaphantsi. Indlela eyilwe ngayo kunye nokubonakaliswa kohlalutyo lwemathematika oluthetha ngalo. I tattoo engapheliyo ibe yinto ekhethekileyo yomyalezo othi amadoda ayakuthanda ukuwasebenzisa ukuxelela amaqabane abo isinqumo sabo sokuba ngcono kunokuba babekho ngaphambili. I tattoo engapheliyo ivela kwiimo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Injongo inokunyuka ngakumbi xa idibene nezinye izinto ukuze zenzeke kwaye ziyamangalisa.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yangaphambili engaphantsi kwamathambo okuyilo ngumbono wamadoda nabasetyhini.
I-Samurai tattoo yilelo tattoo efumana ikhowudi engabonakaliyo ebizwa ngokuba yi-bushido-ithetha iindlela zokuphila. I-bushido ineengxenye ezi-7 ezibalulekileyo ezithetha ngeSamurai. I tattoo ibonisa inhlonipho, inhlonipho, ububele, ukunyaniseka, ukunyaniseka kunye nentliziyo. I tattoo isetyenziselwa ukuthetha ngokukrakra, amandla kunye nobutyebi. Ingabonakaliswa kwizinto ezinqabile kwaye eziyingqayizivele njenge-octopus, i-koi fish kunye ne-octopus ukumela ukhuseleko, uncedo nenkalipho.
I-tatrai i-Samurai yenze ngcono ukuba abantu babonise abalingani babo abanoyikiyo nesibindi. Bafanekisela amandla namandla. I tattoo ingaba ngamadoda kwaye amadoda ayakuthanda ukuyisebenzisa ekuphumeleleni ukulwa kunye nokufa. I-Samurai tattoo ikhuluma ngobuntu bomntu obembetheyo. Umnxeba unokuba ngumfazi kwaye uthatyathwe ngentliziyo ngabafazi. Intsingiselo yeSamurai inokuhamba ixesha elide ukuxelela abanye ibali ongenakukwazi ukusho.
Ukubekwa kweTatra tattoo kunokukwazi ukuxelela ibali elithile okanye intsingiselo enokukuncedisa ekufudukeni ekuphakameni okukhulu ngokungafani nenye enye iinguqulelo zetatyambo ngaphandle.
Cofa apha ukuze ukhangele i-samurai tattoos ingcamango yombono kubantu.
I tattoo yelanga ilithetha izinto ezininzi. Intyatyambo iyaziwa ngesakhiwo sayo kwaye ingaba ihlobo labo bathanda ilanga, uphawu lwehlobo okanye nokuba nesimo sokuthanda. Yintyatyambo enikezelwe elangeni kwaye ibe yinto ebonisa ukuphuhliswa kobomi. Inokugqithwa njengesithsaba kwaye ihlala ibonisa ilanga. Abantu bayithatha njengesimboli sokunyaniseka, ulonwabo, indalo, ukufudumala nokukhanya.
I tattoo yelanga ilinganiswa kwiimpawu ezininzi kunye nobukhulu, kwaye ezi zinto zinentsingiselo yazo. Nguwe onokukwenza ukujikeleza kwelanga lakho kudlule ubunzulu belanga kwizinto ezinzulu kunokuba abanye bangacinga. Abanye abantu bangeze izinto kunye nemilayezo kuyo leyo nto leyo tattoo inokuthetha ngayo. Uninzi lweenkcubeko zineentsikelelo ezikhethekileyo ngokubhekiselele kwelanga. I tattoo ibe enye yezintandokazi zalabo abafuna ukubonisa imeko yabo yobomi ngendlela efudumele. Ukukhawuleka kobomi kunokuzibonakalisa ngokuziqhenya emzimbeni ngokusebenzisa indawo ehlukeneyo. Inxalenye nganye yomzimba inokusetyenziswa ukuthetha intsingiselo yelanga.
Cofa apha ukuze ukhangela i-tattoos yangoku yakhiwa yombono webhanqa.
I tattoo yeHenna ithetha into ebalulekileyo kubaphathi. Ukuhlobisa kwangaphambili emzimbeni onentsingiselo ezininzi. Isetyenziselwa ukumela ulonwabo, inhlanhla kwaye inokufanisa ukulwa, ukuzalwa, iintsikelelo kunye nemitshato. I-tatna tattoo isetyenziselwa ukuthetha nge-intuitive and freehand. Ukusebenzisa i-henna yinto enokukunika unxibelelwano ngokomoya kwaye ivakale iimvakalelo ezifakwe kuyo.
Cofa apha ukuze ukhangele i-henna tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Intsingiselo yeCat Tattoos ithetha izinto ezininzi. Umgqobi ngumntu oya kuthatha isigqibo sokuba enze ntoni nge tattoo. Ikati ifanekisela ezininzi iimpawu, ezibandakanya inhlanhla, ukuchuma, amandla, amabhinqa, imfihlelo kunye nokuxhamla nobuthixo, ukomoya, ukuzalwa kwakhona, emva kokufelwa kwezilwanyana, ukukhuselwa, intuition, ingqiqo, ukulungiswa, ubuchule kunye nokunyaniseka.
Amakati asetyenziswa ukuthetha ngokuzimela ebomini. Uninzi lwabantu abacinga ukuhamba into ekhethekileyo kunye nekhethekileyo banokuya kwi tattoo yekati. Intsingiselo ibalulekileyo kwaye iyamangalisa enkulu ukuqonda. Iimpawu zekati zongezwa kwezinye izinto ukuqinisekisa ukuba zineentsingiselo ezahlukeneyo kwizinto onokucinga ngazo ngaphambili. Intsingiselo ye tattoo yekati ingaba yinto enqwenelekayo nokuba yiyiphi isizathu kubafazi abaninzi baya kuyo. Ukunyamekela okuza nalo kungabonakali kwaye kubaluleke kakhulu ukuba abantu abaninzi baya kufuna ukusondela ekupheleni kosuku.
Cofa apha ukuze ukhangele i-tattoos idizayini yenkcazo yembono yamadoda kunye nabasetyhini.
Umnqamlezo weTattoo uthetha
I-tattoo cross ithetha izinto ezininzi kubantu abaninzi. Oku kungabonakalisa izinto ezilandelayo, uManyano womntu kunye nomfazi, ukungabikho kobuthixo, ubuqhetseba, ubuhlungu ngenxa yothando okanye ukulahleka, uxolo, ukuziphatha, amandla, isibindi, ubuKristu / ukholo lobuKristu, ubomi, ilanga / ilanga, ukukhonza, ukulingana, ukuhlupheka, ukufa , IsiGothic / isiGoth, i-Spiritual, Iwesetyhini, Ukuzinikezela, ukuQiniswa kweNkcubeko, iNhlonipho, ukuNyukela, iNkcubeko / ifa leentsapho kunye neNkumbulo yomthandayo. I-tattoo yomnqamlezo iyathandwa kakhulu kwaye inobunzulu, ubunzulu, inkcubeko kunye neembali ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso.
Amadoda nabasetyhini basebenzise itekisi ngezizathu ezininzi kunye neengqinamba zentsingiselo ehamba ngayo. Uninzi lwabantu luyilungiselela ukuba lukhangele ngokumangalisayo kwaye nguwe oya kuthatha isigqibo sokuba ufuna ukuthini umnqamlezo wakho. Ekugqibeleni, yintoni oyenzayo umnqamlezo wakho ukuba uya kuba kuwe. I tattoo yomnqamlezo ingafakwa kwizinto ezininzi kunye nemilayezo yokutshintsha indlela ebonakala ngayo. Thatha u mzekelo, umnqamlezo oza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Akukho nxalenye yomzimba ukuba ayifanelekanga. Yintoni intsingiselo yomdwebo we-cross? Uninzi lwabantu luneentsingiselo ezahlukeneyo. Kubaluleke kakhulu ukuba ukwazi ukuba uyinki emzimbeni wakho.
Cofa apha ukuze ukhangele i-tattoos ye-tattoos design idea malunga namadoda nabasetyhini.
Usuku lweT tattoo olubhekiselele
Usuku lwabaThambo abafileyo lithetha ukuthetha ngezinto ezininzi. I tattoo ibonisa ezinye izibilini ezintle ezithetha ngabathandekayo abalahlekileyo. I tattoo ingasetyenziselwa ukuthetha ngokukhunjulwa, ukufa, umphefumlo, ukubuya, eMexico, ngokomoya nokubuya. Usuku lwabafileyo lungasetyenziselwa ukubhiyozela abahlobo kunye namalungu entsapho kufuneka ukuba adlule. Kwinkcubeko yaseMexico, yinto ebonakalayo ethandwayo.
Usuku lwabafileyo abaThattoos Ukuthayisana kuyahluka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zoSuku lwabafileyo kunye neentsingiselo zabo. Ingcamango yokuba Usuku lwabafileyo lithetha ukufa ngabantu abaninzi abanokuthi banyanisekile ngakumbi xa bethatyathwa ngesikhombiso esikhulu. Usuku lwabafileyo luyakuthatyathwa ngeendlela ezininzi kwaye zigqitywe ngeentsingiselo ezinkulu ozithandayo. Usuku lweT tattoo luyakhumbuza umntu ofa kwaye kwakhona ukuba sonke simele siphile kulo ubomi ngokuzeleyo. Imilo yoSuku lwabafileyo nayo ineentsingiselo zayo ngokokufunayo.
Cofa apha ukuze ukhangele kwangomhla wabantu abafazi kunye nabasetyhini.
I tattoo yintliziyo kuthetha ukukhunjulwa, isithando kunye nothando. Kukho ezinye iintsikelelo zentliziyo kwaye ezi ntsi ngiselo zivela kwindlela abamele ngayo. Indlela eya kutsalwa ngayo intliziyo kuthetha izinto ezininzi kumntu ogqayo. Imibala, imilo kunye nobukhulu be tattoo yinto eyenza ibe yinto emangalisayo. Ungayisebenzisa ukuxelela ibali lothando. Intliziyo isetyenziselwa ezinye iinkonzo zonqulo ngenxa yokubaluleka kwayo. Ngenani lentliziyo ekhoyo kunye nesenzo esingokomqondiso esimeleyo, nabani na ongayisebenzisa. Unokusebenzisa intliziyo esondelene nenkcubeko yakho ekwenzeni ezinye iingxelo ezinesibindi emzimbeni wakho.
Iidatto zeentliziyo zizinye zezona tattoos ezigqibeleleyo onokuzibona. Akunqabile kwaye kuyimfuneko. Akubona wonke umntu oyawabona le tattoos. Xa ukhangele umzobo we tattoo ukufuna inkululeko yakho, le tattoo yinto enye yokuhamba ngenxa yobuhle kunye nokubaluleka. I tattoo yenhliziyo ayithandwa kuphela kodwa iyakuthandeka ukubona xa imilayezo ifakwa kuyo. Iingcongolo zongezwa kuwo ukuxelela ibali.
Cofa apha ukuze ukhangele ingcamango yamathambo evelele yamadoda kunye nabasetyhini.
tattoo yamehlotattotattoos zelangatattoostattoos zenyangai-tattoostatto tattoosowona mhlobo womhlobozinyoniIintliziyo zeTattoosngesandlatattoo engapheliyotattootattoos kumantombazanaizithunywa zezuluzomculo tattooszengalo zengaloi tattoocute tattoosizifuba zesifubatattoostattoos zohlangaizigulanebathanda i tattoosTattoos zeJometriiifotto zentamoi-cherry ityatyambotattoosiifatyambo zeentyatyamboutywala tattooIndlovu yeendlovudesign mehnditattoos ezinyawoicompass tattooiipattoosihoi fish tattoosibinitattoongombonoiifoto eziphakamileyoiidotitattoostattoo yedayimaniiimpawu zezodiac zempawutatto flower flowerukutshiza amathambotattoos kubantuIintyatyambo zeTattooI-Ankle Tattoostatna tattoo